I-EIBOARD LED Interactive Touch Screen iyiphaneli yemultimedia edidiyelwe yokucabanga, umsindo, ividiyo, ukuxhumana, ukugqwayiza nobuchwepheshe kokukodwa. With interactive smart ibhodi kanye umsebenzi edidiyelwes, isetshenziswa kakhulu kwezemfundo, kwezamabhizinisi kanye nezinkampani ukuze kwethulwe kahle.
I-EIBOARD Led Interactive Touch Screen iyiphaneli yokubhala ehlakaniphile, esetshenziselwa kakhulu imfundo nengqungquthela. Ngedizayini ye-bezel enamacala amathathu ewumngcingo, ukuvikelwa kokhiye wesicabha nesibonisi se-4K UHD, ifakwe amabhodi amhlophe asebenzisanayo nesofthiwe yokusakazwa kwesikrini okungenantambo ngendlela yokusebenzisana nomshini womuntu, okuvumela imodi yokufundisa esebenzisanayo nabasebenzisi abaningi kanye nokuxhumana phakathi. , okucebisa ukufunda ekilasini futhi kuthuthukise isimo sokufunda.
I-EIBOARD Led Interactive Touch Screen isetshenziswa kabanzi kwezemfundo nenkomfa, enezici eziningi ezingezansi:
* Idizayini elula ye-in-one ye-education
Izibonisi zephaneli eyisicaba ezisebenzisanayo zinakho konke esakhiweni esisodwa , okuhlanganisa yonke imisebenzi yebhodi elihlakaniphile, iphaneli esebenzisanayo, iphrojeshini, isofthiwe yezichasiselo, izipikha nebhodi lokulawula.
Ihlinzeka ngokufunda kokuhlanganyela okuphambili kunoma yiliphi ikilasi ukuze othisha nabafundi bakwazi ukwabelana ngokushesha ngemibono esikrinini esikhulu kalula.
* Landela zonke izidingo zakho zokusebenzisana nokusebenzisana
Iphaneli ye-Interactive flat ivumela ubuhlakani bezitshudeni buphile ngokubambisana okulula okuvela kumadivayisi abo siqu noma esikrinini ngokwabelana ngemibono okungenazihibe.
Izibonisi zethu ezisebenzisanayo ezisebenziseka kalula zenza izifundo zibe mnandi kakhulu futhi zingaxhunywa cishe kunoma iyiphi ikhamera yewebhu ukuze isingathe izifundo ukude.
* Iphaneli ye-Anti-glare 4K enezithombe ezicacile
Ngenkathi abantu besebenzisa ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo, indawo yephaneli ye-4K ye-anti-glare izokhuphula ukugxila futhi inciphise ukukhathala, iphinde ithuthukise kahle isimo sengqondo nokuhlala kahle kwabafundi.
* Idizayini Eyingqayizivele
Isivikelo sokukhiya isicabha esishelelayo sihlukile esidizayinelwe ukuthi singangeni manzi futhi singangeni uthuli.
* Iyatholakala Osayizi amakamelo anosayizi abaningi ongawakhetha
Iza ngosayizi wesikrini ongu-65 ″,75″,86″ 55“ kanye no-98 inch screen.
Imodi yokuklama ekhiyekayo ye-Sliding isekela kuphela u-65” 75” 86 no-98inch.
Ngaphezu kwalokho, isikrini sokuthinta se-LED Interactive sivumela amazinga ahlukahlukene okubambisana.Asethelwe ukusiza ukusebenzelana ngokuvumela ukusebenzisana okuvela kumsebenzisi. Akhona namanye amagama asho into efanayo: Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo, ibhodi elimhlophe ledijithali, ibhodi elimhlophe le-elekthronikhi, isibonisi esisebenzisanayo, i-Interactive Flat Panel, iphaneli esebenzisanayo ye-LED, ibhodi elihlakaniphile le-Interactive.
Okwedlule: I-Conference Interactive Flat Panel
Olandelayo: Ibhodi Lebhodi Ehlakaniphile Erekhodikayo ye-LED
I-Wall Mount VESA